Amazon Prime Reading ကိုဘယ်လိုရနိုင်သလဲ၊ eReaders အားလုံး
Joaquín Garcia က | | Amazon Kindle, eBooks
1.0.0.2 Kobo Clara HD ကို
2 Amazon Prime Reading ဆိုတာဘာလဲ။
3 Amazon Prime Reading ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
4 Kindle Unlimited ကဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။
5 တဖန်သင်တို့ဤအပြားနှုန်းထားများအနေဖြင့်အဘယ် option ကိုရပါသလဲ?
လူအမြောက်အများကမည်သည့် ereader ကို ၀ ယ်ယူနိုင်မည်နည်း။ အကယ်၍ သင်သည်အမှတ်သို့မသွားလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုပါသည်။
စျေးကွက်တွင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ereader ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမေဇုံစာဖတ်သူအကြောင်းဖြစ်သည်
Kobo Clara HD ကို
နေသော်လည်း နှုန်းထားများနှုန်းထားများ ebook များသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် ebooks လောကနှင့်မတိုင်မီကဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားကိုမသိသောသုံးစွဲသူများစွာရှိနေသေးသည်မှာမှန်ပါသည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်ကျော်ကြားသော Oyster သို့မဟုတ် Skoobe ကဲ့သို့သော streaming စာဖတ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများစွာ၏ကျဆုံးခြင်းကိုထည့်သွင်းရမည်။ ဒီအခြေအနေမှာ၊ Kindle Unlimited ဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော Amazon က Amazon Prime Reading ဟုခေါ်သောဝန်ဆောင်မှုအသစ်ဖြင့်နောက်ထပ်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။။ ဒါပေမယ့် ဒီဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကဘာလဲ? မည်သည့် eReader နှင့်လိုက်ဖက်ပါသလဲ။ Kindle Unlimited ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ နောက် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်ကဘာလဲ၊ အမေဇုန်ဂေဟစနစ်တွင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုသင်ပြောပါမည်။
Amazon Prime Reading ဆိုတာဘာလဲ။
Amazon Prime Reading သည် Amazon Prime သုံးစွဲသူများအတွက်အကန့်အသတ်မဲ့စာဖတ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုအသစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Nubico၊ Kindle Unlimited သို့မဟုတ် Scribd နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းထက်စာလျှင် ebooks များအတွက်နှုန်းထားများကိုအနည်းငယ်ဖော်ပြရန်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ Amazon Prime Reading တွင် Amazon Kindle Unlimited ပါ ၀ င်သည့် ebook အားလုံးမပါ ၀ င်ပါ သို့သော် Kindle Unlimited ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုသော ebooks အမျိုးမျိုးမှစာရေးဆရာများပေးသောအရည်အသွေးနိမ့်ကျမှုလည်းမရှိပါ။ ဒါကြောင့် Amazon Prime Reading ဟာအမြင့်ဆုံးနှုန်းထားကိုပြောတာပါ ဘယ်မှာအရည်အသွေးကိုအရေအတွက်ကျော်ထွက်ရပ်။ အနည်းဆုံးယခုအချိန်တွင်အဘို့။ ထို့ကြောင့် Amazon Prime Reading catalog ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်လိုက်သောအခါ ebook များကိုအမျိုးအစားခွဲခြားထားကြောင်းတွေ့ရသည် - ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ သိပ္ပံဝတ္ထု၊ ရဲ၊ လူငယ်၊ Looney Planet လမ်းညွှန်များနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်သောစာအုပ်များ။
Portable Caliber: ဘာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ
အမေဇုန်၏ပထမဆုံး streaming e-book ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျော်ကြားစေသည့်တစ်စာမျက်နှာစာဖတ်ခြင်းအတွက်ငွေအိတ်သည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်မရရှိနိုင်ပါ။ Amazon သည်စာရေးသူများနှင့်တိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းပြီးမည်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်ငှားရမ်းမည်ကိုဆုံးဖြတ်ကြသည်။ သို့မဟုတ် ebook များ၏ချေးငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုမှ ၀ င်ငွေအားလုံးနှင့်အတူအိတ်မဖန်တီးပါနှင့်၊ စာမျက်နှာဖတ်ခြင်းအတွက်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ပါ။
Amazon Prime Reading ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
မည်သည့်သုံးစွဲသူမဆို Amazon Prime Reading ရှိနိုင်ပြီး Kindle Unlimited ထက်စျေးသက်သာပါသည်။ ငါတို့က Amazon Prime အသင်း ၀ င်တွေဖြစ်ရမယ်။ ဤအသင်း ၀ င်မှုသည်မည်သည့်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်မဆိုနှင့်အခြား Amazon Prime ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် Kindle Unlimited တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်မည်
Amazon Prime Reading နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောထုတ်ကုန်များသည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက် ereaders, tablet နှင့် apps များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုစာဖတ်နိုင်သည်။ ဤအရာအားလုံးပြီးဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်စာဖတ်ခြင်းကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည် အကယ်၍ ၎င်းသည် Amazon Prime Reading catalog တွင်ပါဝင်လျှင် "read free" ခလုတ်ကိုစစ်ဆေးပါ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်ကိရိယာပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ယခုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်း ebooks ၁၀ ခုရှိသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခွဲတမ်းကိုဖုံးထားပါကကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ပြီးသော ebook ကိုသာအမှတ်အသားပြုရန်လိုအပ်သည်။ အားလုံးအမေဇုံစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းကနေ။
Kindle Unlimited ကဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။
ကျနော်တို့ကအချက်ကိုအလေးပေးရပေမည် Amazon Prime Reading နှင့် Kindle Unlimited တို့အကြားအဓိကခြားနားချက်မှာ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုစီသည်၎င်း၏ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏အရည်အသွေးနှင့်ရရှိနိုင်သော ebooks အရေအတွက်ဖြစ်သည်။။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Amazon Prime Reading သည်စာဖတ်ခြင်းတစ်ခုစီကို Kindle Unlimited မပါ ၀ င်သည့်အချိန်တွင်ဖတ်ရှုလေ့လာခြင်း၊ လေ့လာခြင်းနှင့်လေ့လာခြင်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုနှစ်ခုကြားအဓိကကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှု၏စျေးနှုန်းသို့မဟုတ်တစ်ပြိုင်တည်းဖတ်နိုင်သောခေါင်းစဉ်များကဲ့သို့သောအခြားခြားနားချက်များရှိသည်။
စျေးနှုန်းကတော့ရှင်းနေသည်မှာ Amazon Prime Reading သည် Kindle Unlimited ထက်စျေးသက်သာသောကြောင့်ဖြစ်သည် Kindle Unlimited ကိုတစ်လလျှင်ယူရို ၉.၉၉ နှင့် Amazon Prime Reading သည်တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၁၉.၉၅ ကျသင့်သည်။ Amazon Prime Reading နှင့်အတူ Prime Video၊ Amazon Prime နှင့် Amazon သည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်နေသည့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုနှင့်အခြားတစ်ခုအကြားစျေးနှုန်းကွာခြားမှုမှာထင်ရှားသည်။ အမေဇုံ၏စာဖတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအကြားအခြားခြားနားချက်များမှာမထင်ရှားလှပါ
Amazon ၀ န်ဆောင်မှုများအတွင်းအရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ပြိုင်တည်းဖတ်နိုင်သော ebooks အရေအတွက်ဖြစ်သည်။ Kindle Unlimited ကသင့်အား ebooks အမြောက်အများကိုတစ်ချိန်တည်းဖတ်ရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်ကိရိယာများအားလုံးတွင်မဟုတ်သော်လည်း Amazon Prime Reading သည်တစ်ချိန်တည်းခေါင်းစဉ် ၁၀ ခုဖတ်ရန်သာခွင့်ပြုထားပြီးအသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုပါကခေါင်းစဉ်တစ်ခုထားခဲ့ရန်လိုအပ်သည်။ ebook ။
ဤအင်္ဂါရပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်စေသည်၊ အမှန်မှာရွေးချယ်ချင်သူများအတွက်သာဖြစ်သည်၊ သို့သော် Amazon Prime Reading catalog သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ebook များထောင်ပေါင်းတစ်ဝက်လောက်ကြီးမားသည်မဟုတ်၊ အမြင့်ဆုံး ebooks ၏ခွဲတမ်း။
တဖန်သင်တို့ဤအပြားနှုန်းထားများအနေဖြင့်အဘယ် option ကိုရပါသလဲ?
သူတို့ရဲ့ဖတ်ရှုခြင်းနှင့်အတူတောင်းဆိုမှုအရှိဆုံးအသုံးပြုသူများအဘို့, အမေဇုံချုပ် Reading သည်အလွန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်, ဖြစ်နိုင်သည်ဤခေါင်းစဉ်များအများအပြားသူတို့ကိုဖတ်ပြီးသားပါပြီ။ သို့သော်အမှန်မှာဈေးချိုင့်သည် Amazon Prime Reading ပတ်ပတ်လည်ပျံသန်းသည်မှာမှန်၏။
လပေါင်းများစွာအမေဇုံနှင့်နီးစပ်သောသတင်းရင်းမြစ်အများအပြား Amazon မှ Amazon Prime ရှယ်ယာကိုတစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၄၀ မှ ၁၀၀ သို့မြှင့်တင်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများ၏စျေးနှုန်းကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးအကျိုးဆက်အနေဖြင့် Kindle Unlimited ၏ကုန်ကျစရိတ်သည်နိမ့်ကျလိမ့်မည်။ သို့သော်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲကိုယခုထိမလုပ်ရသေးသော်လည်းမည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်အသုံးပြုမည်ကိုမသိရသေးပါ။ ထို့ကြောင့်ယခုစျေးနှုန်းကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးအနည်းဆုံးတစ်ဝက်ချုပ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုခံစားနိုင်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ငါ Kindle Unlimited ၏နှုန်းထားများကိုသာမှီခိုအား ထား၍ ဖတ်နိုင်သည့်ဖတ်ရန်ကိုရှာဖွေနေသောအသုံးပြုသူများနှင့်အရည်အသွေးနိမ့်ကျသောစာဖတ်သူများကိုဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအကြံပေးလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ Kindle Unlimited တွင်စာအုပ်များနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် (Amazon Prime Reading ကဲ့သို့နိမ့်ကျခြင်း) မရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စာပေအရသာကိုသိပြီးသိရန်ကျွန်ုပ်တို့ထက် သာ၍ ကောင်းသောသူမရှိ.
တကယ်လို့များ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သောဖတ်ရှုခြင်းကိုမြန်ဆန်စွာရချင်လျင် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့သည် Amazon စတိုးမှတစ်ဆင့်အရာအားလုံးကိုဝယ်ယူသောအသုံးပြုသူများဖြစ်လျှင်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာ Amazon Prime Reading ဖြစ်သည်။ ဖတ်ရှုခြင်းအတွက်သာမက Amazon မှပေးသောအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ပိုပြီးပရီမီယံဖောက်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Amazon Kindle » အမေဇုံချုပ်စာဖတ်ခြင်း၊
တကယ်တော့ဒါဟာ Kindle Flash ကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့စာအုပ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းပဲ (Prime Reading ရဲ့အကျိုးအတွက်တစ်နေ့ပျောက်ကွယ်သွားရင်ငါမအံ့သြပါဘူး)
အကယ်၍ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်လျှင်တိုင်ကြားချက်မရှိပါ။ အခြားစတိုးဆိုင်များတွင်မည်သူမျှအလားတူအရာများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
Jorge Luis Cruz Pérez ဟုသူကပြောသည်
ငါမက္ကစီကို၌ရှိ၏, ဒါကြောင့်ငါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေဇုံကနေဝယ်ပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်း၌သာအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတင်ပို့ရောင်းချခြင်းများလား။ အမေဇုံပလက်ဖောင်းကညွှန်ပြသည့်အတိုင်းလွန်ခဲ့သောတစ်လကဖော်ပြသောငွေပမာဏထက် ပိုမို၍ ၀ ယ်လိုသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အမေဇုန်ပလက်ဖောင်းမှဖော်ပြသကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်မေးမြန်းသည်။ ကန့်သတ်ချက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းတင်ပို့မှုနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ကျေးဇူးပါပဲ။
Jorge Luis Cruz Pérezကိုပြန်ပြောပါ
ဒုတိယ barayazarra ဟုသူကပြောသည်
ဒုတိယ barayazarra အားပြန်ကြားပါ
Kobo Clara HD ကိုပြန်လည်သုံးသပ်